Sidee looga sameeyaa mobilada dhaqso leh 9kan khiyaano | Androidsis
Ignacio Sala | 22/07/2021 18:00 | Aaladaha Android, Khiyaamada Android
Kuwo badan ayaa adeegsadayaasha na weydiiya talooyin ama tabaha Samee mobilada si dhakhso leh. Runtii ma jirto khiyaano doqonimo ah oo shaqeyneysa, maadaama aanan haysan ikhtiyaar aan ku furno boosteejada si aan u ballaadhinno booska keydinta, ku darno RAM badan, beddel processor-ka ...
Haddii aad rabto in terminaalkaagu u shaqeeyo sida maalinta koowaad, waxa kaliya ee aad sameyn karto waa inaad raacdo mid kasta oo ka mid ah talooyin aan kugu tusno maqaalkanTalooyin isku dhafan kuwa kale ama shaqsi ahaanba, ayaa dhowr sano ka maqnaan doona qalabkaaga.
1 Dib u bilow si joogto ah
2 Booska ku bannee adigoo tirtiraya faylasha aadan isticmaalin
3 Tirtir barnaamijyada aadan isticmaalin
4 Nadiifi kaydinta arjiga
5 Isticmaal webapps ama noocyada Lite
6 Dami animations-ka nidaamka
7 Had iyo jeer rakibi nooca ugu dambeeya ee nidaamka hawlgalka
8 Dib u cusbooneysii boosteejada warshadda
9 Beddelida batteriga sidoo kale waa ikhtiyaar
Dib u bilow si joogto ah
Qalabka elektarooniga ah ee lagu maamulo nidaamka hawlgalka ee barnaamijyada lagu rakibi karo, waxay u baahan tahay kalgacal dadka isticmaala. Taasi waa, sida dadka iyo duunyada waxaan u baahan nahay hurdo si aan u sii wadno shaqada, aaladaha elektaroonigga ah waxay u baahan yihiin inay nastaan ​​waqti ka waqti, iyaga oo dib u bilaabaya ama si joogto ah u daminaya.
Sida markii aan nasanno ayaynu xoog u kacnaa, qalab marka dib loo bilaabo waxay siin doontaa sida ugu fiicanIn kasta oo loogu talagalay inay ahaadaan maalmo, markii aad dib u bilowdo, waxay amar ku soo rogaan xusuusta RAM, iyagoo xiraya codsi kasta oo furan oo furaya kaliya kuwa ay u baahan yihiin inay shaqeeyaan.
Iyadoo aan saacaduhu soconayn, qalabku wuu socdaa oo muujinaya calaamadaha daalka, waxaan wajaheynaa tilmaan cad oo ah inaad u baahan tahay inaad nasato, ama adigoo daminaya iyo mar kale ama si toos ah dib u u bilow.
Booska ku bannee adigoo tirtiraya faylasha aadan isticmaalin
Nidaam kasta oo hawlgal ah oo codsiyada lagu rakibo, waxaan ku laabaneynaa aasaaska aasaaska barta hore, wuxuu u baahan yahay meel bannaan oo wax lagu kaydiyo si loo shaqeeyo. Marka kumbiyuutarka Windows-ka (si aan u soo qaadno tusaale innaga oo dhan ku dhacay) uu ka dhammaado booskiisa diskiga adag, kumbuyuutarku wuxuu bilaabaa inuu si gaabis ah u shaqeeyo sidii caadiga ahayd.
Sida looga saaro barnaamijyada horay loogu rakibay Android
Wax la mid ah ayaa ku dhaca Android, sida iOS, macOS, Linux iyo nidaam kale oo hawlgal. Ka dhigista qashinka casriga ah mid ka mid ah hababka ugu fiican casrigayagu wuxuu sii wadaa inuu u shaqeeyo sidii maalinta koowaad. Mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu nadiifiyo feylasha aan ka soo dejisanno taleefannadeenna casriga ah oo aanan mar dambe ku xusuusan faylasha ay soo saartay Google.
Tirtir barnaamijyada aadan isticmaalin
Codsi kasta oo aan ku rakibno qalabkeenna moobiilka, wax ka beddel diiwaanka android, markaa mustaqbalka fog, mar kasta oo aan bilowno xarunteena, waxay sameysaa jeegag taxane ah waxayna ku shubtaa taxane xog ah nidaamka. Nidaamkani ma aha oo kaliya inuu hoos u dhigo waqtiga bilowga ee casriga casriga ah, laakiin sidoo kale wuxuu saameeyaa waxqabadkiisa.
Haddii aan dooneyno taleefannadeenna casriga inay u shaqeyso sida maalinta ugu horreysa, oo ay ula mid tahay sanduuqa, waa inaan isku daynaa inaan kaliya haysano codsiyada aan u baahan karno si joogto ah ama goos goos ah.
Sida loo tirtiro barnaamijyo badan isla mar isla markaana aan xidid ku lahayn Google Play
Maaddaama booska kaydinta ee casriga ahi ballaadhay, hawshani waxay noqotay mid aad u dhib badan, Maaddaama inbadan ay yihiin adeegsadayaasha sugaya inay arkaan farriinta meel aan ku filnayn inay tallaabo ka qaadaan. Haddii aad rabto inaad ogaato barnaamijyada aad ugu yar ku isticmaasho taleefankaaga casriga ah, waxaad ku isticmaali kartaa barnaamijka Faylasha Google.
Codsiga faylasha Google ayaa kuu sheegi doona dhammaan codsiyada aad ku rakibtay bartaada iyo waqtiga dhaafay ilaa waqtigii kuugu dambeeyay ee aad isticmaashay. Macluumaadkani wuxuu noo oggolaan doonaa inaan si dhakhso leh u ogaanno codsiyada ku haray qalabkeenna.
Nadiifi kaydinta arjiga
Hadaanay dhamaan terminalku si tartiib ah ushaqeynin, laakiin waxqabadka ayaa yaraanaya waa lagu arkaa codsiyada qaarkood, waa inaan fiirino faahfaahinta barnaamijka oo aan nadiifino keydka. Haddii ay wali u shaqeyso si qalad ah, waxaan sii wadi karnaa inaan ka saarno oo aan dib u dhigno.
Hadday wali tahay, ma jirto qaab ay ugu shaqeyso si habsami leh, xalka kaliya ee aan ka tagnay waa in la adeegsado nooca Lite haddii la heli karo ama nooc WebApp ah, noocyo aan ku sharxi doonno qaybta xigta.
Isticmaal webapps ama noocyada Lite
Noocyada Lite ee codsiyada, markii la heli karo, waa noocyo mashquul ka yar 2 MB kuwaas oo aan ku jirin qaar badan oo ka mid ah shaqooyinka aan ka heli karno arjiga caadiga ah, si aan ugu kala duwanaano si uun.
Noocyada Lite ayaa loogu talagalay boosteejada-dhamaadka-dhamaadka oo inta badan ku wajahan suuqyada soo kordhaya. Haddii aadan ka heli karin nooca Lite-ka ah dalabka aad uga baahan tahay Play Store, waxaad dhex mari kartaa bakhaarka APKMirror.
WebApp-ka, sida aan si fiican uga soo qaadan karno magiciisa, wax kale ma aha nooc ka mid ah websaydhka arjiga. Noocyada noocan ah ee barnaamijyadu waa nooc ka mid ah marin-u-helidda tooska ah ee websaydhka adeeg-bixiyaha, laakiin iyadoon la muujin is-dhexgalka biraawsarka, muujinta is-dhexgalka aaladaha moobiilka si la mid ah sida looga muujiyey degelkeeda.
Inaad ku saleysnaato biraawsar isku xira adeegaha adeegga, maahan in la cusbooneysiiyo, maaddaama haddii wax isbeddel ah lagu sameeyo hawlgalka ama adeegga la sameeyo, waxaan arki doonnaa inay ka muuqato markii aan dib u fureyno arjiga.
Dami animations-ka nidaamka
Daacad noqo. Dhammaanteen waxaan jecel nahay nidaamka qalliinka si uu noo tuso animations Markaad furaysid codsiyada, marin u helida meheradaha, codsiyada xiraya ... Si kastaba ha noqotee, animations-yadaani waxay u baahan yihiin awood garaaf ah oo aaney dhammaan tiirarku si habsami leh u bixin karin.
Haddii aad rabto inaad ku abaalmariso waxqabadka bartaada terminaalka, waa inaad ka fikirtaa ka saar animations. Si aad uga saarto animations-ka ku jira Android, waa inaad marka hore dhaqaajisaa xulashooyinka soo-saaraha (adigoo riixaya lambarka dhismaha dhowr jeer).
Markaad dhaqaajiso qaabka soo-saaraha, waa inaad marin u hesho liistada cusub ee ka muuqata boggeena isla magac isku mid ah oo aad raadsato ikhtiyaarka noo oggolaanaya inaan wax ka beddelno howlaha animations-ka, si loo yareeyo ama loo kordhiyo waqtiga ugu dambeeya ama gab gabkooda
Had iyo jeer rakibi nooca ugu dambeeya ee nidaamka hawlgalka
Mar kasta oo soo saarahayagu na siiyo ikhtiyaarka, waa inaanu isku dayno rakibi nooca ugu dambeeya ee nidaamka hawlgalka diyaar u ah terminaalkeena. Xaaladaha badankood, soo-saaruhu wuxuu ka shaqeeyay inuu kordhiyo dheecaanka iyo waxqabadka terminalka, in kasta oo munaasabadaha kale, ay tahay tan ugu xun ee aan sameyn karno.
Markaan idhaahdana waa waxa ugu xun ee aan samayn karno, maxaa yeelay waxaan ahay nidaam hawlgal oo cusub, haddii dhammaadkeenna ay durba dhutineyso nooca hadda jira, waxay u badan tahay in nooca cusub, waxqabadka uu ka sii xumaan doono.
Kahor cusbooneysiinta, haddii aan rabno inaan taas hubno waxqabadka saameyn kuma yeelan doono, Waa inaan booqanno YouTube-ka oo aan raadino fiidiyowyada gundhiggeenna oo leh nooca Android-ka ah ee aan diyaar u nahay inaan rakibno.
Laga soo bilaabo Androidsis waxaan had iyo jeer kugula talineynaa ku rakib cusbooneysiin kasta oo ay bilaabeen soo saarayaashu maadaama ay tahay habka ugu wanaagsan ee loo ilaaliyo marinkeena markasta oo laga ilaaliyo u nuglaanta amniga.
Dib u cusbooneysii boosteejada warshadda
Haddii waxqabadka terminal-kaaga la mid maaha markii aad ka soo saartay sanduuqa oo waxaad dooneysaa inaad xasuusato waqtiyadaas markay si habsami leh u shaqeyneysay, adigoon ku mashquulin qabashada howlo fudud, furitaanka kaamerada ama adeegsiga codsiyada, waligeed dhib malahan inaad dib u cusbooneysiiso aaladdayaga meel laga soo bilaabay.
Dib u celi qalabka si eber macnaheedu yahay ka saar gabi ahaanba waxyaabaha ku jira oo dhan in aan ku keydinay goobteenna, oo ay ku jiraan sawirro, fiidiyowyo iyo mid kasta oo ka mid ah codsiyada la rakibay. Sidan oo kale, terminaalku wuxuu soo bandhigi doonaa waxqabad la mid ah maalinta koowaad.
Nidaamka dib loogu soo celinayo qalabka, mahadnaqa isku-darka Google iyo daruuraha Waa wax fudud oo dhakhso leh (iyada oo aan loo eegin inta ay qaadaneyso terminaalkeena si loo fuliyo howsha). Google wuxuu iskuduwayaa iyada oo loo marayo koontada emaylka ee laxiriira taleefanka ajandaha, jadwalka, howlaha xitaa wuxuu noo ogolaanayaa inaan sameyno nuqullo nuqul ah oo runtii muhiim ah: sawirro iyo fiidiyowyo.
Marka aan dib u soo celino boosteejada, waa inaan galnaa oo keliya xogta isla koontada Google si xogta ajandaha, kalandarka iyo kuwa kale loogu guuriyo aaladda dib u soo ceshano ee sawirrada iyo fiidiyowyada, si aan u helno waxyaabaha ugu muhiimsan annaga oo gacanta ku hayna markale.
Beddelida batteriga sidoo kale waa ikhtiyaar
Xulashada ugu dambeysa ee aan uga tagnay taleefankeena casriga si aan dib ugu soo ceshano waxqabadkii shalay ayaa ah inaan batariga bedelno. Qaar ka mid ah shirkadaha wax soo saara sida Apple ayaa ku lug lahaa muran ku saabsan in lagu daro hawl qarsoon oo ku jirta IOS taas oo hoos u dhigtay waxqabadka terminaalka markii batterigu ka hooseeyo 80% awoodiisa, si loo sameeyo. ka jooji terminal-ka inuu si lama filaan ah u xirmo.
Samsung waxaa lagu eedeeyay isla isla waxyar kadib, in kastoo lama tusi karin inay sameeyaan isla dhaqankaas. Waxay u badan tahay in soosaarayaasha qaarkood ay hirgeliyeen shaqo la mid ah isla ujeeddadaas, si looga hortago in terminaalku si lama filaan ah u demiyo oo uu nooga tago xannibaadda, in kasta oo indhaha xun haddana loo qaadan karo inay tahay hal caddayn oo dheeraad ah oo gaboobay.
Haddii boosteejadaada ka weyn yahay 2 sano, batteriga ayaa ugu xun. Haddii aadan ugu talagalin inaad cusbooneysiiso boosteejadaada maxaa yeelay kan aad haysatid ayaa shaqeeya, xalka ugu jaban waa inaad bedesho batteriga. Waxay u egtahay in isbeddelka kadib, aad dib uheli doontid xawaaraha dhammaystirkaagu soo bandhigay maalintii ugu horreysay ee aad sanduuqa kala soo baxday.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida looga dhigo taleefankaaga gacanta 9-ka tabaha si dhaqso leh
HAYLOU RS3, falanqaynta, waxqabadka iyo qiimaha